Ụlọ ahịa 2016 SharePoint: Gịnị dị ọhụrụ maka ndị mmepe? - Ụlọ akwụkwọ nkà na ITS
Ụlọ ahịa 2016 SharePoint: Gịnị dị ọhụrụ maka ndị mmepe?
Ihe dị ọhụrụ na 2016 na-emekọrịta ihe
Ọrụ arụmọrụ - Smarter
Mfe nghọta - dị mfe
Nchedo ka mma - Nchekwa
Sharepoint bụ ngwa ngwa kọmputa nke gụnyere Microsoft Office. Ejiri ya na 2001, Sharepoint bụ nke a na-ere dị ka nchekwa nchekwa na nchịkọta akwụkwọ, ma ihe a na-edozi ma jiri ya mee ihe dị iche n'etiti ndị mmekọ. Ọ dị ike ma debe iji weghachite akwụkwọ na envelopu ego. Usoro nhazi nke arụ ọrụ na-enye mgbidi ụlọ na ntinye ngwa ngwa na-enye nghota nke njikwa njikwa data SharePoint site na mmelite mmemme na-erite uru. Ndị e mepụtara bụ ihe nkedo nchekwa data na ntụgharị uche na-agbanwe agbanwe. Ọ na-eme ka nchịkọta data njikwa na-achịkwa usoro ndụ nke data.
E nwere nsụgharị dị iche iche nke Sharepoint nke nwere ikike pụrụ iche:
Ekekọrịtala OnlinePointPoint na nke Microsoft Office 365 ruo ọnwa ma ọ bụ ndị òtù ọ bụla kwa afọ, ma enwere ike nweta ya na. Emere ya ka ọ bụrụ ndokwa dị n'etiti ịhazi mgbalị, nchịkọta faịlụ, na akwụkwọ na nchịkwa ọdịnaya, ma mee ka ọ dị ọhụrụ.
Nke a bụ 4 dị iche iche mere ndị otu na - ejikọ SharePoint:
Ọ bụ ikike na ihe ndị sara mbara
Njikọ bara ọgaranya ma dị ike na Office 365
Microsoft na-etinye ike na SharePoint's Future
Nwepụta-nke-na-akpa Ngwọta dị ka Bonzai Intranet dị nnọọ mma ịmekọrịta Intranet SharePoint gị
2016 na-emekọrịta ihe e kere ya na mbido nke mbụ na ígwé ojii, ihe abụọ ahụ nke oké ifufe na-ewere ụwa.
Enwere ọtụtụ ihe na Sharepoint. A na-akọwa akụkụ nke ndị a ma ama n'okpuru.
Ntinye mmemme nke Ogidi Indexed. Ọ na-ewepu arụ ọrụ ahụ ma jiri ihu igwe 5000 na-ekpuchi ihu.
Okpokoro uzo ichu ihe ichu achọta onyinye nke ichotara ederede na ihe di iche iche na-achota ma o bu ihe omuma site na Sharepoint Online na On-preface
Ederede kachasị mma nke nha nke a ga-ezoro ezo si na 2GB gaa na 10GB. A na-eme ka ndị na-ede akwụkwọ ntanetị na-arụ ọrụ na 2016.
Gụnye ngwugwu- Ndị ahịa na Sharepoint 2016 ga-ahụ nzaghachi ndị a na-akpọ Packa Packs na-abịa ha iji mee ka mmelite ahụ rụpụtara maka Sharepoint na Office 365 laghachi na On-Premises.
Ihe di iche iche nke 2016 nke software a egosiputa ihe omuma atu, MinRole, nke n'ezi iziputa, na-eme ka ogbugbu na mma agha ghara imeghari, ma na eme ka uzo ugbo. Dika MinRole na-agbasi mbọ ike idozi ihe ndi ozo, onye obula nke ochichi achoghariri ka o sie ike, o na-eme ka o di oke karia ihe ndi ozo.
MinRole ama. Site n'iji ngwaọrụ ọhụrụ a na 2016 Sharepoint Server, ndị nchịkwa na-ahụ maka ihe ubi nwere ike ịkọwa akụkụ nke ọ bụla n'ime ugbo ogbo
SharePoint 2016 dabeere kpam kpam site na Office 365. A na-ewere ya dị ka ihe kachasị nkwụsị, siri ike na ihe niile gbara mbọ ịchọpụta ihe Microsoft nke dịka nke ugbu a jiri ọtụtụ nde mmadụ mee ihe ugbu a. Dị ka Microsoft si kwuo, a chọrọ iji codebase ahụ mee ihe maka ọkpụkpọ SharePoint n'ọdịnihu.
Nhọrọ dị iche iche na-adị na nso nso a na-esonyere interface ntinye aka. Nke a na-eme ka ahụmahụ nke itinye ya n'ọrụ na ekwentị ma ọ bụ mbadamba.
Uti nkwalite na onye ntinye ngwa na nke ga eme ka nyochaa ma ọ bụ SharePoint 2016 ma ọ bụ Office 365 niile dị mfe.
Microsoft Flow- The Sharepoint Workflows dị na ndụ na nke siri ike. Ubochi nke ubochi di ugbua ka o buru ibu, o gaewe ihe karia nani SharePoint na ozo ohuru iji kpughee ihe ndia.
OneDrive nke BusinessPoint 2016 SharePoint na-agbakwụnye ntụgharị. Ọ na-eme ka ụzọ dị mfe maka ndị ọ dị mkpa iji nwayọọ nwayọọ gaa na nchịkwa ojii. Site na SharePoint kachasị ọhụrụ, ndị ahịa nwere ike ịgbanarị ebe obibi ha / saịtị OneDrive na Sharepoint Online OneDrive maka Business. Nke a ga-enye ha nnwere onwe iji tinye faịlụ ha site na mpaghara ọ bụla.
Mpaghara N'uzo - saịtị saịtị SharePoint na-enweta ume ọhụrụ, ha ga - eme otu a Office 365 Otu. Ụzọ ọzọ bụ nke ọzọ dị oke mkpa, dị ka mgbe ị na-eme otu Ụlọ Ọrụ Office, ọ ga-enye gị otu Team Site ugbu a.
Onye na-ahụ maka ahịa ugbu a nwere ike ịhụ ihe osise na ihe ndekọ site na ịpị ha na akwukwo akwukwo na ntinye aka.
Karịa nanị ịkọgharị, ndị ahịa ahịa Microsoft Microsoft kachasị ọhụrụ nwere ike ịmegharị akwụkwọ ma ọ bụ data site na OneDrive ka SharePoint na-edozi nsogbu ahụ.
Ọ na-enye nchebe dị ukwuu maka ndị ahịa na ndị njedebe na njedebe ma ha nwere oke na igwe ojii. Ọ na-eso Njikọ Rights Rights (IRM) rụọ ọrụ iji chebe data site na ịchọrọ egwu na ịchekwa data na ụlọ ahịa Bookpoint na OneDrive maka Business.
Na SSL 3.0, achọtawo nchebe nchebe, nke nwere ike ikwe ka onye mmemme na-akọwa ihe ọmụma. Iji mee ka ọ ghara ịchọta ya, ihe ngosi dị iche iche na-adịbeghị anya na-ewepụ SSL 3.0 mkpakọrịta nzuzo dịka ihe doro anya, na ụfọdụ nchịkọta nzuzo (dịka ọmụmaatụ RC4) na ihe ndị a maara.
Site na nnyefe SharePoint 2016 n'akụkụ nkuku, ike na ike na-arụ ọrụ na nke a dị oke iche iche a na-atụ anya ka mezuru ihe ka ọtụtụ n'ime ndị nchịkwa IT ka hazie ndokwa ha n'ọdịnihu.
Ọganihu nke Ngwọta Nchọpụta Ọhụrụ
Ịhụ na mmasị maka ndị ọkachamara nwere nkà, ịnya ụgbọala IT na-akwadebe soplaya Ọ BỤ emeela ka ihe ntinye akwụkwọ Sharepoint na-eto eto na-eto eto. Nke a na-agwụ ike na-ekpuchi akụkụ niile nke ngwanro ahụ ma ga-enye aka nyochaa isi okwu ezi uche dị na Sharepoint.
Microsoft Dynamics 365 | Njikọ nke CRM & ERP
Mpaghara Vs SharePoint Online SharePoint